လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်း၊ လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့် ဥပဒေအရအတည်ပြုခြင်း | FLEGT
လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်း၊ လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့် ဥပဒေအရအတည်ပြုခြင်း/
VPA အား လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်း၊ လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့် ဥပဒေအရအတည်ပြုခြင်း
ဆန္ဒအလျောက် မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) သည် နှစ်ဖက်အဖွဲ့များ၏ ဥပဒေပြုအာဏာပိုင်အဖွဲ့များက နိုင်ငံတကာ စာချုပ်စာတမ်းများ အတည်ပြုခြင်းပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအတိုင်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့များက တရားဝင်လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးမှသာ ဥပဒေအရချည်နှောင်မှုရှိသည့် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်အဖြစ် စတင်အာဏာ သက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်လအတော်ကြာမှ တစ်နှစ်ကျော်အထိကြာမြင့်နိုင်ပြီး လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းဆိုသည့် အဆင့်သုံးဆင့် ပါဝင်သည်။
လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်း။ ဥရောပကော်မရှင် နှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရမှ VPA အား လက်မှတ်တိုရေးထိုး စတင်လိုက်သည်နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများ အဆုံးသတ် ခြင်းဖြစ်သော် လည်း တရားဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများအရ လက်မှတ်တို ရေးထိုးခြင်းဖြင့် နှစ်ဖက်အဖွဲ့ဝင်တို့သည် လက်မှတ်တိုရေးထိုးထားသည့် စာချုပ်စာတမ်း တွင်ပါဝင်သည့် စကားလုံးများကို လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လက်မှတ်တို ရေးထိုးပြီးသည်နှင့် တစ်ဆက်တည်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန် သို့မဟုတ် အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးရန် သဘောတူသည် ဟုသွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။ အဖွဲ့ဝင်များVPA လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်းနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ကြားကာလ တွင် တစ်ဖက်စီသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်သည့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ များဖြင့် သဘောတူညီချက် ကို အတည်ပြုရမည်။ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တွင် ၎င်းသည်ပါလီမန် တွင်မဲပေးခြင်း နှင့်၊ သို့မဟုတ် သမ္မတ သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးချုပ်မှအတည်ပြုခြင်း တို့ကိုပါဝင် စေနိုင်သည်။ နှစ်ဖက်အဖွဲ့တို့သည် VPA အား လက်မှတ်ထိုးသောအခါ ၎င်းတို့သည် သဘောတ ညီချက်တွင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လိုကြောင်း ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို တရားဝင်ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာဥပဒေများအရ လက်မှတ်ရေးထိုး သူတို့သည် လက်မှတ်ရေးထိုး လိုက်ခြင်းအားဖြင့် "စာချုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်မှန်းချက်ကို မဖောက်ဖျက်ပါ"ဟူ သည့် စည်းကမ်းချက်ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် အဆုံးသတ်ခြင်း။ VPA တွင်ပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များသည် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီကစာချုပ်အားအတည်ပြုပြီးသောအခါအဖွဲ့များကို ဥပဒေ အရ ချည်နှောင်ပြီး အကယ်၍VPA တွင် ပြဌာန်းထားပါက စတင်အာဏာ သက်ရောက်မည့် သတ်မှတ်ချိန်ကိုပါအတည်ပြုပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးသည် နိုင်ငံတကာစာချုပ်များ အတည် ပြုပြဌာန်းသည့်လုပ်ထုံးလုပ် နည်းစံများ အတိုင်း လိုက်နာရမည်။ ဥပမာ လွှတ်တော်များမှဆန်း စစ်ခြင်းကဲ့သို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် EU တွင် အတည်ပြုပြဌာန်းခြင်းသည် EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ ၎င်းတို့၏ လွှတ်တော်များနှင့် ဥရောပပါလီမန်ပါဝင် သည့်အဆင့်များ ထည့်သွင်း ထားပါသည်။ ဤအဆင့်များပြီးမြောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ဥရောပသမဂ္ဂ ကောင်စီမှ VPAအား နောက်ဆုံးအတည်ပြုခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်သည်။
စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးသည်နှင့် နှစ်ဖက်အဖွဲ့တို့သည် ၎င်းတို့၏ စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးစီးကြောင်း တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အကြောင်းကြားရမည်။ ထို့နောက် သဘောတူညီချက်ပါ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ စတင်အာဏာသက်ရောက်သည်။ EU တွင် အကြောင်းကြား လွှာအား ဥရောပသမဂ္ဂ တရားဝင် ဂျာနယ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ဤအဆင့်၌ ဥရောပကော်မရှင်နှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံတို့သည် တရားဝင်ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ပြီး VPA ၏ပူးတွဲ အကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီသည်လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်သည်။
အတည်ပြုပြဌာန်းခြင်းသည် VPA အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို တရားဝင်စတင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်သော်လည်း ယနေ့အထိပြုလုပ်ပြီး VPA လုပ်ငန်းစဉ်အများစုတွင် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မပြီးဆုံးမီကပင် စတင်လေ့ရှိ သည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် နှစ်ဖက်အဖွဲ့ဝင်တို့သည် ကြားဖြတ်ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ (JIC) သို့မဟုတ် အကြို JIC ကို ဖွဲ့စည်း ပြီး လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်းနှင့် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်းအကြား လုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းသိမ်းလေ့ ရှိသည်။
ဥပဒေအရ နှစ်ဖက်အဖွဲ့တို့မှသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအတည်ပြုပြဌာန်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များပြီးစီးကြောင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အကြောင်းကြားပြီးနောက် VPA စတင်အာဏာသက်ရောက်သည်။ သို့ရာတွင် စတင် အာဏာသက်ရောက်သော်လည်း FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်းစနိုင်သည်ဟု သဘောတူခြင်းမဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့တွင် သဘောတူညီချက်စတင်အာဏာသက်ရောက်ပြီးနောက် FLEGT လိုင်စင်မထုတ်ပေးခင် ရှေ့တွင် VPA ကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် လုပ်ငန်းအတော်များများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်
VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်
Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting.9October 2013, Brussels. [အင်တာနက်မှ PowerPoint presentation ကိုရယူရန်]